Ekpere nke Ebube. ? Maka Nchedo & Bipute | + Dị ike
Ekpere nke Ihe EbubeN’ụfọdụ n’ime ihe akpọrọ ya, ekpere ahụ bụ Ebube karịrị ekpere e jiri egwu nwanyị Meri na-atụgharị n’onwe ya mee elu nke Chineke Pụrụ Ime Ihe Niile.
Nwa agbọghọ Virgin Mary, nne nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, hụrụ ike na ọrụ ebube nke Chineke n'onwe ya site na ịtụrụ ime site na ọrụ na amara nke Mmụọ Nsọ Chineke, anyị na-ahụ nke a n'ime akwụkwọ nsọ.
Thebụ nne Jizọs ghọrọ nne nke ndị niile kweere n'okwukwe Ndị Kraịst, ọ bụ ya mere ekpere a ji dị oke mkpa n'etiti ndị Kraịst.
1 Ekpere nke Ebube Ebube
2 Ekpere nke Ihe Ebube diri nchebe na Latin
2.1 Ekpere ibipụta
2.2 Gịnị bụ ekpere nke Onye Ebube?
2.3 Gịnị bụ ekpere a nye nwa agbọghọ na-amaghị nwoke?
2.4 Kedụ mgbe m nwere ike ikpe ekpere?
Ekpere nke Ebube Ebube
Nyenu Jehova nkpuru obi m, obi juputara n’ọ joyụ m, mgbe ị na-atụgharị uche ịdị mma nke Chineke Onye nzọpụta m.
N’ihi na o lewo anya n’ozi ohu ya dị umeala n’obi ma hụ ihe kpatara ya n’ihi na ha ga-eme m obi ụtọ ma nwee ọ happyụ n’ọgbọ niile.
N'ihi na O mewo ihem dika ihe uku di ebube di ebube, Onye Nke puru ime ihe nile, aha-Ya bu kwa onye nsọ: Nke ebere-Ya di rue ọb generationọ na ọb generationọ nile.
Ọ gbatịpụrụ ogwe aka nke ike ya, wee wezuga mpako nke ndị mpako, na-akpaghasị atụmatụ ya.
Ọ napụrụ ndị dị ike ma bulie ndị dị ala elu.
O were ngwongwo jujue ndi dara ogbenye na ndi bara uba hapụrụ ha n’enweghi ihe efu.
O buliri ohu Ya elu nye Israel, Icheta ya n’ihi ebere ya na odi nma ya.
Dịka o kwere nna anyị Abraham na ụmụ ya nile nkwa na mgbe ebighi-ebi.
Ekpere nke Magnificat ma ọ bụ Magnificat dị ike ma nwee ike ịme n'oge ọ bụla ma ọ bụ ọnọdụ bilitere.
E nwere ndị ahụrụla ọmarịcha ọrụ ebube n'etiti ekpere a, otu ihe na -emekarị bụ mmụba nke okwukwe, nke a bụ ọrụ ebube ozugbo anyị nwere ike inwe n’ime onwe anyị.
Enwere ike ịme ahịrịokwu a n'asụsụ mbụ bụ Latin, ma ọ bụ na ntụgharị ya dị iche iche gaa n'asụsụ ọ bụla.
Ekpere nke Ihe Ebube diri nchebe na Latin
Ebube dị ukwuu maka Dominum,
ime mmụọ mmụọ dị na Deo salutari meo,
Icce enim ex hoc beatam na-agwa m ọgbọ niile,
onye egwu mangna bu
etum eumus eius eius,
Egosi na ihe ngbanye aka nke oge niile.
Fecit potentiam na brachio suo,
chụgara superbos uche cordis sui,
ike isi n'isi deposuit,
Onye dị umeala n'obi
ndị ozi na-akwado bonis,
na divites belata inanes.
Suscepit Israel puerum suum recatus misericordiae suae, nke a
sicut locutus est ad patres nos Abraham et semini eius na saecula.
Ngwaọrụ ike iji nye nchebe maka onwe anyị, ezinụlọ, ndị enyi ma ọ bụ ngwongwo dịka ụlọ, azụmaahịa ma ọ bụ ụgbọ ala.
Ekpere nke okwukwe jupụtara na ya bụ usoro nchekwa kachasị mma anyị megide ihe ọ bụla na-adịghị mma anyị chọrọ ịwakpo.
O siri ike ịlele ike nke ekpere Ebe obu na nke ahu dabere na okwukwe etinye na ya, ya mere anyi mara na ihe gaeji mee ka oru aka a di ike ikwere.
Anyị ma etu ọ dịr'ịdị mkpa ịna-ekpe ekpere oge niile.
Ọ bụ ya mere o jiri nwee ekpere dị n'okpuru ka ebipụta. Can nwere ike ibipụta kpee ekpere mgbe ọ bụla na ebe ịchọrọ.
Gịnị bụ ekpere nke Onye Ebube?
Na nmalite okwu a, ebum n’obi ya kwuwapụta ịdị ukwuu nke Chineke site n’ikwe ka Meri weta onye nzọpụta n’ụwa.
Taa ka a na-ekpe ekpere a n'ihi ekele nye Chukwu maka ịzọpụta anyị n'oge ihe isi ike, maka ọrụ ebube ụfọdụ ọ natara na akara ngosi ekele ndị ọzọ anyị nwere ike ịnwe n'onwe anyị.
Abù nke eji aririọ maka nchebe, maka ndi amoosu, enyemaka, nkasi obi, okwukwe na ọrụ ebube dị ịtụnanya.
Dịka ekpere niile ọ siri ike ma kee ya ka anyị jiri ya rụọ ọrụ oge kachasị anyị niile.
Gịnị bụ ekpere a nye nwa agbọghọ na-amaghị nwoke?
Ekpere ma ọ bụ abụ nke mmụọ nsọ sitere n’aka otu Chineke nke anyị nwere ike ịchọta n’ụzọ dị mfe n’akwụkwọ nsọ, ọkachasị n’Abụ Ọma dịka Saint Luke n’isi 1 ruo n’amaokwu 26 ruo 25.
Ederede juputara na ekele nye Chineke na ebe Nwa agbọghọ na-amaghị nwoke matara ịdị ukwuu na ike nke Chineke nna.
Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ebe Meri na-akuziri anyị na inye Chineke ekele enweghị ike ịdị ụkọ, site n'ekpere a dị ebube anyị ga-amata na usoro nke Chineke, ọ bụrụgodi na anyị anaghị aghọta ya, na-eweta ngọzi na ndụ anyị oge niile.
Dika Meri nke nechere ịlụ di ma lụọ ime site na ọrụ na ekele nke Mụọ Nsọ, ọnọdụ siri ike nke ọ matara etu ọ ga-esi rụọ ọrụ na amamihe iji mee ka Onye-nzọpụta bata n’ime ụwa.
Onweghi oge ma obu oge ikpere.
Gha ikpe ekpere mgbe inwe okwukwe na uche. Oge adịghị mkpa, ihe dị mkpa bụ ikwere n'ike nke ekpere.
Na-ekwenye mgbe nile na ike nke Nwa agbọghọ. Nke ahụ bụ ihe kachasị mkpa.
Were ike nke ekpere nke Onye Ebube. Ọ dị ezigbo ike nke ukwuu!